100% - ရွှေမြို့တော်
မတ်လ 3, 2012 တွင် 2:24pm အချိန် +++Shin Thant Mayမေတ္တာရှင်မလေး`♥ မှ မျှဝေပို့များ ကဏ္ဍတွင် တင်ပြခဲ့ပါတယ်
လေးမှာပေါ့...ကောင်လေးတစ်ယောက်နဲ့ကောင်မလေးတစ်ယောက်ထိုင်နေတယ်တဲ့လေ...သူတို့ကချစ်သူစုံတွဲတွေတော့မဟုတ်ပါဘူး...ကောင်လေးကကောင်မလေးကိုအဖြေတောင်းနေတာပေါ့....* နင်ပြောပါ...ငါ့ကိုအဖြေမပေးတာ..ငါ့မှာဘာလိုအပ်ချက်ရှိလို့လဲ..*ငါ့အချစ်ကိုရဖို့..နင့်မှာ 100% ရှိရမယ့်...အရာတစ်ခုနင့်မှာရှိရမယ်...အဲဒီအရာကိုနင်သိတာနဲ့နင့်ကိုငါအဖြေပြန်ပေးမယ်...**အိုကေလေ...ဘယ်လိုအရာကိုပြောတာလဲ..**A B C ဒီစာလုံးလေးတွေကို...အစဉ်လိုက်တိုင်းအဓိပ္ပာယ်နင်ဖွင့်ရမယ်...သူတို့မှာတန်ဘိုးကA ဆိုရင် 1 ပေါ့ B ဆိုရင် 2ပေါ့ C ဆိုရင် 3ပေါ့ နင့်ဆီမှာလိုအပ်နေတဲ့အရာကို..ဒီစာလုံးလေးတွေနဲ့အဓိပ္ပာယ်ဖော်ပြီး 100%ပြည့်တဲ့အရာတစ်ခုကိုသိအောင်လုပ်ရမယ်..သိတာနဲ့. ငါ့အဖြေရပြီ..*ကောင်လေးလည်း...သူ့မှာလိုအပ်နေတာဘာလဲဆိုပြီးအသဲအသန်ကိုစဉ်းစားပါတော့တယ်..ဟုတ်ပြီ..နင့်ဆီကအချစ်ရဖို့အတွက်က ငါကံကောင်းဖို့လိုမယ်ဆိုပြီး..Luck ကိုတွက်ကြည့်ပါတော့တယ်..။L+U+C+K= 12+21+3+11=47%ဟင်...47% ပဲရှိတယ်..ဒါဆို..ကောင်မလေးတွေကကျန်းမာသန်စွမ်းတဲ့ကောင်လေးဆိုသဘောကျတယ်ဆိုတော့...ဟုတ်ပြီ...HealthH+E+A+L+T+H= 8+5+1+12+20+8=54%ဒါလည်းမဟုတ်သေးပါလား...ဟူး...အိုကေ...နင့်ဆီကအချစ်ရဖို့အချစ်လိုတာပေါ့...Love ကိုတွက်ကြည့်ရမယ်...L+O+V+E= 12+15+22+5=54%ဟိုက်! ဒါလည်းမဟုတ်သေးပါလား...အိုကေ...မိန်းကလေးတွေကငွေကိုမက်တာများတယ်..ဒီတော့လာထား..MoneyM+O+N+E+Y= 13+15+14+5+25=72%ဟုတ်ပြီငွေလည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်...ဗဟုသုတနဲ့ပြည့်စုံတဲ့သူကို..မိန်းကလေးတွေအထင်ကြီးကြတာပဲံ.... KnowledgeK+N+O+W+L+E+D+G+E= 11+14+15+23+12+5+4+7+5=96%ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးဆိုရင်..အလုပ်ကြိုးစားတဲ့ကောင်လေးဆိုရင်သူတို့ဘယ်လိုမှမငြင်းနိုင်ပါဘူးလေဆိုပြီး...Hardworking ကိုတွက်ကြည့်ပါသတဲ့..။H+A+R+D+W+O+R+K+I+N+G= 8+1+18+4+23+15+18+11=98ကောင်မလေးရေ...ငါလည်းဘယ်လိုမှမစဉ်းစားတတ်တော့ဘူး....နင်ပြောတဲ့ 100%ပြည့်တဲ့အရာရှိသေးလို့လား..နင်တို့မိန်းကလေးတွေမက်မောတန်ဖိုးထားတဲ့အရာတွေလည်းကုန်ပြီဟ...လို့လည်းဆိုရော..ကောင်မလေးက...စာလုံးလေးတစ်လုံးကိုချရေးပြလာပါတော့တယ်...ကောင်မလေးရေးပြလိုက်တဲ့စာလုံးလေးက....Attitude တဲ့လေ...ကဲပေါင်းကြည့်...A+T+T+I+T+U+D+E=1+20+20+9+20+21+4+5=100%မြဲမြဲမှတ်ထားကောင်လေးရဲ့...ငါတို့မိန်းကလေးတွေနင်တို့ကောင်လေးတွေဆီကနေလိုအပ်နေတဲ့အရာက...နင့်ရဲ့ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်သဘောထားနဲ့..ငါ့အပေါ်ဆက်ဆံတဲ့အပြုအမူတွေပဲ...လေ..ကောင်မလေးရဲ့စကားလေးကိုကြားလိုက်ရတဲ့ကောင်လေးဟာ..အောက်ပါအတိုင်းမှတ်ချက်တစ်ခုကိုသူ့ရင်တွင်းတစ်နေရာမှာခိုင်ခိုင်မာမာပိုက်သွားပါတော့တယ်
အမျိုးအစား: မျှဝေ ဒါကိုကြိုက်တယ် အဖွဲ့ဝင် 26 ဦးကြိုက်ခဲ့သည်
ထိုဖိုရမ်တွင်းစာပေတွင်ဝေဖန်ပြောဆိုချက်များ★★★★★(သင့်ကော်မန့်တခုက ရေးသားသူအတွက် အားဆေးတခွက်ပါ)
Permalink မတ်လ 3, 2012 တွင် 2:30pm အချိန်မှာ Kyaw မှပြန်လည်ပြောဆိုချက် အခုလိုစာကောင်းလေးမျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲ။
Permalink မတ်လ 3, 2012 တွင် 2:48pm အချိန်မှာ 1gzh7n6gfrw1o မှပြန်လည်ပြောဆိုချက် မိုက်တယ် ...ဗျို့ ....
Permalink မတ်လ 3, 2012 တွင် 8:07pm အချိန်မှာ 195exe548jd8t မှပြန်လည်ပြောဆိုချက် ကောင်းသားပဲဟ ဟဲဟဲ
Permalink မတ်လ 3, 2012 တွင် 8:26pm အချိန်မှာ ရန်လင်း မှပြန်လည်ပြောဆိုချက်ေိခိ ဘယ်သူ့ကိုပေးရမလဲ မမရေ အကြံပေးပါဂျ။
Permalink မတ်လ 3, 2012 တွင် 9:10pm အချိန်မှာ +&sky kyaw&+ မှပြန်လည်ပြောဆိုချက် ငါ့မှာ ၁၀၀%ရှိရဲ့သားနဲ့ဘာလို့ခုထိကောင်မလေးမရှိတာရဲ...
Permalink မတ်လ 3, 2012 တွင် 9:37pm အချိန်မှာ ကွန်ဆူးမား မှပြန်လည်ပြောဆိုချက် Attidute.................................
Permalink မတ်လ 3, 2012 တွင် 9:46pm အချိန်မှာ လရိပ်ချို မှပြန်လည်ပြောဆိုချက် ရင်ထဲမှာ မှတ်သားထားလိုက်ပါပြီ
Permalink မတ်လ 3, 2012 တွင် 10:34pm အချိန်မှာ 2y92sfksxxxii မှပြန်လည်ပြောဆိုချက် ရေးတဲ့သူ စိတ်ကူးးကောင်းတယ်
ပြန်လည်ဝေမျှတဲ့ မမခြင်းကိုလဲ ကျေးဇူး
Permalink မတ်လ 3, 2012 တွင် 11:18pm အချိန်မှာ နေမင်းခိုင် မှပြန်လည်ပြောဆိုချက် စိတ်ကူးလေးတွေတော်တော်ကောင်းတယ်
Permalink မတ်လ 4, 2012 တွင် 2:02am အချိန်မှာ khin maung swe မှပြန်လည်ပြောဆိုချက် အရွေးကောင်းပေါ့
Permalink မတ်လ 4, 2012 တွင် 7:58am အချိန်မှာ ရဲဇော်ကို မှပြန်လည်ပြောဆိုချက် ငါ့အချစ်ကိုရဖို့..နင့်မှာ 100% ရှိရမယ့်...အရာတစ်ခုနင့်မှာရှိရမယ်...အဲဒီအရာကိုနင်သိတာနဲ့နင့်ကိုငါအဖြေပြန်ပေးမယ်...**အိုကေလေ...ဘယ်လိုအရာကိုပြောတာလဲ..ကောင်းတယ်ဗျာ...အာပေးသွားတယ်...ကူးယူခွင့်ပြုပါနော်ရလား.....
Permalink မတ်လ 4, 2012 တွင် 10:37am အချိန်မှာ chitmabal မှပြန်လည်ပြောဆိုချက် A+T+T+I+T+U+D+E=1+20+20+9+20+21+4+5=100%
Team Work နဲ. အလုပ်လုပ် နေတဲ. ရွှေမြို.တော် ကြီး မှာ လူတိုင်းက Positive Attitude ဆိုတဲ. ကောင်းမွန်တဲ့စိတ်သဘောထား ရှိ နေကြလို.အောင်မြင်နေတာပေါ.နော်....
လက်ဆောင်ပေးရန် ARAKAN ROHINGYA AESH US KYAW THU
လက်ဆောင်ပေးရန် AungKyaw KyawOo
­ အခု အချိန်တွင် မြို့တော်၌ ၀င်ရောက်နေသည့်
ကိုချမ်း အခု အချိန်တွင် မြို့တော်၌ ၀င်ရောက်နေသည့်
အောင်ထက်ပိုင် အခု အချိန်တွင် မြို့တော်၌ ၀င်ရောက်နေသည့်